Taliyaha cusub ee Qeybta 43-aad ee laga celiyey Kismaayo oo kasoo degay magaalada Garbahaarey ee G. Gedo | KALSHAALE
Taliyaha cusub ee Qeybta 43-aad ee laga celiyey Kismaayo oo kasoo degay magaalada Garbahaarey ee G. Gedo
Muqdisho ( Kalshaale ) Taliyaha cusub qeybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka Jen. Cali Maxamed Maxamuud Bogmadow ayaa maanta gaaray magaalada Garbahaarey ee Gobolka Gedo, kaddib markii saaka laga soo celiyay magaalada Kismaayo.
Waa tragic, in Farmaajo iyo his HAG group in federal wiiqaan waxay rabaan inta Puntland u gudbin in little brother Jubbaland oo federal wada in shaarubaha dhulka loogu xiro.
Baydhabo haddii Jubbaland la dabro meel uma socdaan, Puntland cidla lasoo istaagin.
Waxa socda waa: federal awoodooda sidee uga taqalusnaa,
Waxaa calaamad kuu ah, xitaa in wax weydiiyaan Madoobe lama rabo..
Hadana Mareexaan iyo Gedo in la shaqayn laga dhaadhicin rabaa.
Waa isjiijiid cusub iyo federal lugoo.
Laakiin u malayn maayo in federal cidna dumin karto maanta.
Time will tell.🤒
Lop waa mxy cabsida kugu jirta somali ninba meeshuu udhashy qoor kyhy waxan dowlada lagu sheegana waa iska shimbirayohow heesa guud ahaana kor nalaga heystaa.
Nin dul saaran Kaare kuukuuyo makala jecla iney heshiiyaan reer Kismaayo iyo inkale,
Dhuxusha iyo shacabka Kismaayo waxey kala soo degaan dekedda ayaa u muuqato.
Lixaab ayaan ka dhigney markaan dhahney 5ta Soomaaliyeed ayaa ninba line ka soo galaa Kismaayo ee kalsooni iska day oo shaaha u wada kari.
Maxaad ku ogeyd Kablalax Kaare shisheeye saaran, ilaa sakiin loogu xiiro laamiga Kismaayo dhexdiisa Soomaali dhab ah noqon mahayo.
Yaahuu . Kismaayo ayaa laga soo ceyriyey deedna Garbahaarey ayuu ka degay ! Geedaha ayaa madaxa lagula jiraa. Oo maxay soo kordhineysaa meereysiga. Adeer hala wajaha xaqiiqda. Axmed Madoobe isagaa qardeystay Kismaayo , qofkii wax ku darsanayo ha Isa soo caanbixiyo. Bu’aale iyo Gedo inta looga soo cararay Alshabaab iyo Mooryaan ayaa la doonayaa in lagula daarto MARAQA uu karsaday Axmed Cadde. Farmaajo sarkaalkaasi ha ceshada ama ha ku qanciyo Axmed Cadde .
@LOP KKKK Isjiid jiidka dhaqan baan u yeelanay.
Waxaan aad ugu mahad celianayaa Cabdiwali Gaas,federalka waxaa dhalay maamul goboleedyada kkkk lagama fiirsan.
Maamul goboleed yaa dhalay marka?waa arrinta hadda taagan,haddii dawaladda dhexe aanay go’aan qaadan karin,mamul goboleed ma qaadan karo,gobol na warkii daa oo degmooyinka waa in la tashi loogu tagaa ka dibna tuulooyinka.
Waa aragtida oranaysa madaxweynaha somaliya waa inuu go aan kastaa weydiiyaa 12million ee somalida caqligaa aad baan uga helay.
Arrinta qabiil ma ahan,ninka la soo celiyay waa ogaadeen reer isaaq,Axmed ma rabo in uu dhaafo kismaayo iyo dhuxusha puntland sidaa ayay la rabtaa kismayo waligeedba furin bay ahayd.
@Cabdiraxman axmed Jubaland tii la rabay ma wado, xalku wuxuu ku jiraa in aan fowdo la bilaabin dawaladda dhexe shaqadeeda haloo daayo sidaa ayay somalinimo ku jirtaa haddii kale waxaad arki iyadoo sidii wax waalan la isku wada dhagan yahay caqlina ma ahan,wax darsiga ma garan jubaland ma kismayo kaliyaa?Jubaland xorta ah waa Gedo iyo kismayo sow xaq ma ahan marka in uu la tashi sameeyo axmed oo aannu go aan qadan kaligii?
FG:Ninkan wax mucaarad ku ah ma jiraan laakiin isagaa mucaarad isugu filan sidoo kale ogow GABRE waa tagay Kenyana xal uma ahan reer jubaland xaqiiqdu sida ay ila tahay Axmed wuu waalan rabaa mana soconayso
ma waxaad kismaayo ka dhigtey CUMAR FINISH oo qeyb ka xirtey MADIINA, marka waxaad leedahey MUUSE SUUDI hala heshiiyo Cumar finish asagaa xaar xaartey GEEDKA JACEYLKA IYO BARAAKO MADOW..
Kismaayo ka weyn geedka jaceylka C/Raxmaanow, Axmed waa nin weyn wedkiis waa yaqaan waxaa soo dhow doorasho kismaayo Albaabo badanna waa ka soo xirmeen marka waa inuu mooryaan iska dhigo.
Shabaab aan Axmed Cadde aheyn miyaa jiro, raga Jillib joogo waa ciyaalkiisii ayagaa soo diro dhuxusha.
Maqaam la’aanta Xamar iyo inuu maanta Axmed Cadde soo diido taliyaha ciidanka soomaaliyeed waa dhibka uu Xassan Shiikh uga tagey dadka iyo dalka soomaaliyeed.
eedeeda asagaa leh waxeyna ka mid tahey dhibaatooyinka taagnaan doono xataa hadey SOOMALILAND SOO LAABATO oo ah arinta ugu culus burburkii soomaaliya.
Qaranimo wax kasokeeya ninkii waxkuraadi isyiraahda wallee caano kama liso.
Ahmed Madoobe waa nin naga caqli badan waa na qamqamiyay Mar wuxuu leeyahay XAFIISYADA Dawladda farta lagu qoro WAA inay ahaato FARSOMALI, calanka Somali ma ahe waa inuusan calan kale ka muuqan xafiisyada Dawladda Maan-gaabta aan ka mid ahayna wey cabtay “ALLAAH Somali sana!!!.” *Gaas daba soco ilaa Mudug OON u qaadanay inuu u caqli celina KU hungownay. ***Axmed wuxuu ula dhaqmaa madaxdda Dawladda Dhexe sidii TUUG dhumasho ku yimid; Wasiirki Kowaad Saacid ma xurmayn, wasiirki Difaaca Fiqi wuxuu KU xiray Ayroboorka LAMA tirikaro inta jeer u madaxda Dawladda bahdilay. *Waxaan Axmed Madoobe kula talilahaa ADDUUNKI is bedel oo waxaa yimid nin la yiraah Abiy Axmed oo seef sita oon ogolayn Maamul Goboleed aan ka dambayn Dawladda Somalia MARKA Axmed Madoobow Moorada Somali ku soo noqo intay goori-goor tahay. WBT
Nimanki Harti oo QARANKA ahaa WAXAA la goostay in la gumeeyo oo laga soo reebo 4xabo oon cidna iska celikarin. Dariiqa loo marayna waa in la adeegsado maan-gaabtooda & Danayste *IDINKU u dagaalama danta Majeerteen IDINKUNA danta Isaaq MAXAA idinka dan ah KHAATUMO STATE OF SOMALIA oo rabta inuu Dhulbahante noqdo ummad madax bannaan oon Beel kale hoos imaan. *Khaatumo haanoolaato adeer WIILKA reer Maxamuud, Cumar M/muud & Laylkase ood u yeerayso MUXUU ugu Dhinta TUKARAQ oo Dhulbahante isku dagaala ADIGU C/maxamuud oo 2ba u kala safan “wax kastaba haysku hayste” MID ma la safalahayd?. ILAAHOW sidii roon na waafaji. Adeer qarnigi 1999ki ayyaad joogtaaye HABAR WACASHO Mawdki ka adeegay ILBAXNIMO & XISAABTAN BAA YIMID. WBT
Waa shantii soomaaliyeed oo la helee Alxamdulilaah dhaha hadii ducadii laydinka aqbalay!kkkk
wuxuu soo marayba akhirkii wuxu isu bedelay
Madaxwaynaha jubbaland xaqiiqdii wuxuu salka u
Dhigay kacaa kufkii iyo qaxii dilooday rer kusmayo
Marka aad dib u jalecdo gabodfalkii iyo dhibkii horay
U gaaray kismaayo maanta waxaa ka jira cirtaa
Jug leh xaga cadalada axmed waa ninkii 7 wiil oo
Ogaden ah u dilay nin shekhal ah oo goobwayn lagu
Dilay qabiil somaliyed oo aan xil ka hayn jubaland
Ma jiro war magaladi way dhisantay dhibkii qabiilna
Waa daayey ee odayga si hoose haloola xajoodo
Taliye saxardiidna xilkiisa haloo xero dayo araare
Ayuu caawa Ugus ku hor fadhiyaaye
Celintaasi waxaa ka dambayndoona wax aan ognahay.
“waaa laygu qasbijiray inaan dawlada ka hor-imaado”.
Rag badan ayaa u baahan in la warayso .
Ina Ilayba waa ooyayaa o wuu leeyahay rag Tegree ah ayaa i isticmaalijiray oo inaan dadka laayo igu qasbijiray.Hadda ayuu qirtay inuu ahaa Eey la rabaystay.
Kan la yidhaa Axmed Madoobe,waa Eey kale oo ay rag meesha keensadeen,isagana maalmihiisu way tirsanyihiin.Waxaa u hadhay inta la dhisayo ciidan Somaliyeed oo wadanka amaankkisa la wareega.Isna markaa ayuu sheegidoonaa qaabkii loo isticmaalijiray iyo ragii ku qasbijiray inuu celiyo wixii ka soo dega Airportka Kismaayokkkkkkkkkk
Waa lay qasbijiray kkkkkkkkkkkkkkkk
Madoobe baryahan maxaaa khilaaafka Ku wata
Adeeroow, SOOMALI WEYN waxaan ahayn FEDERALISM nama anfacaan.
Yeeli meeyno, in MUQDISHU noqoto CAASUMAD SOOMAALIYEED.
SOOMAALI WEYN wali waxaa ku yaal daqaradii kaga dhacday MUQDISHU.
SOOMALI WEYN waxaa wali ku yaal daqaradii ay ku dhufteen HAAWEYDA HAWIYE.
HAAWEYDA HAWIYE wali waxeey MUQDISHU ku haaystaan xoolihii ummada SOOMAALIYEED, oo ay ka mid yiheen; GURYO, DHUL, HOTEELO, BEERO.
HAAWEYDA HAWIYE, waxeey rabban in ay ratiga ku kacsdaan miskiinkaan FARMAAJO, oo xataa ogeyn wuxuu caaway ku casheeyey.
BAL EEGAA, MAREEXAAN oo wale ku taamayaa in ay ka argoostaan KABLALAX DAAROOD, edeb darrada ay ka wadaan JUBBALAND.
JUBBALANDhal erid ay leedahy oo laga soo galo.
JUBBALAND gadaal-gadaal ninkii ka soo gali, ciida aan la cunsiina.
GENERAL CAANOOD, waxa uu ka wado JUBBALAND ma aha wax la qaadan karo.
MUJAAHID ROOBOOW aa noo sharaxan, kan ku soo koray luf-lufka iyo dilaalnimada ee SHARIIF SAKEEN, waa iska eryeenaa, markaas baano soo xidhan doonaa ilaa iyo JAZIIRA.
HAAWEYDA HAWIYE IYO MOORIYAANTA HABAR GEDIR markaas baano iska xoraynaynaa, markii aanu SHABAAB ooda u rogno.
DHILO QASWEYN. KII WACALNIMADA KUGU DHALAY AA EEY AH.
AHMED MADOOWBE AY MA AHAA, EE WACALNIMADA KUGU DHALAY AA EEY AH.
IBNO MAKHNUUD, IBNO MAKHNUUD.
WELDONE axmed madoobe ,hhhhhhhhhh waa dhaxalka federaalka somalidu qaladka ka fahantey in sarkaal dawladda dhexe ka soo magcawday laga masaafuriyo gobol somaliya ka mid ah,,waa bur burkii jubbaland ,waayo garba haarey ,car ha yimaado axmed madoobe ,I LOVE THAT hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Haduu federaalka meesha dhaafiyo 8 12 iyo sano isagaa xukumaayo villa xamar bunkana ku cunaayo.